चीनले भारतको सिमामा अत्याधुनिक तोप तैनाथ गरेपछि भारतलाई तनाव, के गर्ला अब भारतले ?
चीनले भारतको सिमाना जोडिएको तिब्बतमा अत्याधुनिक तोप तैनाथ गरेको छ । त्यहाँको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सकाअनुसार चीनको सेनाले त्यहाँ तैनाथ आफ्नो सैनिकहरुको युद्ध क्षमता सुधार गर्नको लागि होवित्जर तोप तैनाथ गरेको हो ।
पत्रिकाका अनुसार शनिबार चीनको जनमुक्ति सेनाको स्थल फौजको वीच्याट एकाउन्टमा यससम्बन्धमा एक लेख जारी गरिएको छ । यो तोप सवारी साधनमा जोड्न मिल्ने भएकाले सजिलै एक ठाँउबाट अर्को स्थानमा सार्न सकिन्छ । सो स्थानमा योभन्दा पहिले हल्का युद्धक तोप तैनाथ गरिएको थियो ।
एक सैनिक विज्ञ सोङ झेङपिङका अनुसार होवित्जरमा ५२ क्यालिबरको तोप जडित हुन्छ । यसले ५० किमी टाढासम्म मार हान्न सक्छ । साथै यसले लेजर–निर्देशित र भू–उपग्रह निर्देशित मिसाइल झार्न सक्छ ।
भारत र चीनबीचको सीमामा सन् २०१७ मा विवाद देखिएको थियो । महिनौंपछि तनावपूर्ण गतिरोध अन्त्य भएको भए पनि उक्त स्थानको विवाद भने समाधान भइसकेको छैन । चीनले आफूले कसैलाई डर देखाउन भन्दा पनि आत्मसुरक्षाको लागि तोप ल्याएको बताएको छ ।
चीनकाे यस कदमले भने भारतलार्इ तनाव पैदा गरेकाे विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन् ।
उत्तर कोरियाको पहिलो भ्रमणमा रहेका राष्ट्रपति सिले भने, ‘उत्तर कोरियालाई हाम्रो सधै साथ रहेको छ’
अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुँदैछ ?
अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरुलाई ठूलो झट्का, अर्को सातादेखि लाखौं गैरकानुनी आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्पको घोषणा
सी पहिलोपटक उत्तरकोरियाको भ्रमणमा
के नेपाल-चीन मित्रता नयाँ उचाइमा पुगेको हो ? बीबीसीको यस्तो छ विश्लेषण
ट्रम्पलाई लाग्यो ठूलो झट्का : व्यापार युद्ध अन्त्य गर्न भन्दै ६ सय अमेरिकी कम्पनीले ट्रम्पलाई लेखे चिठी !